Waa maxay Teknolojiyadda ay Suuqleyda Heerka C-maal Gashanayaan? | Martech Zone
Talaado, Maarso 22, 2016 Douglas Karr
Madowga Madoow wuxuu sameeyay a Daraasadda Suuq-geynta C-2016, Sahaminta suuqleyda ka socota 2000 ee ugu sareeya shirkadaha ugu waaweyn dalka Mareykanka iyadoo loo qoondeeyo dakhli sanadle ah iyadoo miisaaniyada suuq geynta ee wadajirka ah ay tahay $ 5 bilyan oo doollar oo shaqaale iyo kharash ah.
Soodejiso Sahaminta Suuqgeynta Heerka C-ee 2016 ee heerka 'Black Ink' ee XNUMX
Casharrada Muhiimka ah ee Daraasadda Khadadka Madoow
Ahmiyadaha suuqleyda ayaa ah in la sii hormariyo ku-xirnaanshaha sumcadda iyo u kuur-galka macaamiisha oo u baahan doona horumar baaxad leh oo loogu talagalay kaabayaasha Teknolojiyada Suuq geynta iyo awoodaha omni-channel.
Helitaanka horumarsan Analytics si aad u gaarto go'aanno xikmad leh”Ayaa ah caqabada kaliya ee ugu weyn ee lagu gaari karo guul kooxda oo dhan.
Dhismaha xiriirka waaxaha iyo waaxaha ayaa muhiim u ah guusha mustaqbalka, in kasta oo inta badan la iska indhatiray iyada oo ah mudnaanta sanadka 2016.
Guud ahaan, suuqleyda ayaa doorbidi lahaa in ay maalgashi badan ku sameeyaan sii-haynta macaamiisha iyo dadaallada sii kordhaya, halkii ay ka heli lahaayeen macaamiisha.
Suuqleyda ayaa ku kalsoon inay soo sheegaan guusha ololaha xeeladeysan laakiin waxay u halgamayaan inay u gudbiyaan shuruudaha ka-qaybgalka maaliyadeed suuq-geynta C-suite iyo maamulka sare.
3-da qaybood ee ugu sareeya ee loo yaqaan 'Martech' waxay u badan tahay in la iibsado sanadka 2016 waa Sirdoonka Ganacsiga, Gaadiidka Suuqgeynta, Iyo Isdhexgalka Macaamiisha xal software.
Waa wax xiiso ii leh in suuqleydu ay ogaadeen in dhammaan dhinacyada khibrada macaamiisha ay saameyn ku yeelanayaan sii haynta, hase yeeshee aysan ka shaqeyneynin sidii ay u yareyn lahaayeen farqiga u dhexeeya waaxyaha kale. Ma hubo sida aad u wanaajiso dadaalkaaga helitaanka iyo sii-haynta adigoon si dhow ula shaqeynaynin iibkaaga, wax soo saarkaaga, adeeggaaga, iyo waaxaha maareynta maalin iyo da 'ay sumcaddaadu tahay mid guud oo laga heli karo internetka qof walba. caqabadaha hortaagan guusha qalabka, ilaha, iyo hogaaminta ayaa lagu faahfaahiyay natiijooyinka… laakiin sidee baad u horumarin kartaa kuwa adiga oo aan la wadaagin sumadda oo aan hubin ku guuleysigeeda dhammaan muhaajiriinta?
Marka laga eego dhinaca aaladda, Teknolojiyada Suuqgeyntu waa uruurin jaban oo kumanaan xal ah. Ciyaartoyda waaweyn sida Salesforce, Microsoft, Oracle, SAP, iyo Adobe waxay sii wadaan inay iibsadaan aalado yar yar oo saxiya arrimaha u gaarka ah - laakiin shaki yar ayaa ka jira in tani ay tahay warshad isku-dhafan oo leh tan qalab iyo is-dul-saar. Waxaan dareemayaa inaysan jirin wax badan oo isdaba-marin ah oo ku saabsan isku-xirnaanta suuq-geynta shirkadahaas ka baxsan kuwa waaweyn.
Black Ink ROI's C-level 2016 Study Marketing wuxuu muujinayaa qaar ka mid ah guud ahaan, isbedelada ballaadhan ee suuq geynta ee saameynaya shirkadahan caalamiga ah, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah waxyaabaha u gaarka ah dhaqamada shirkadda, dookha miisaaniyada, caqabadaha, iyo fursadaha.
Waxaan la shaqeynaa qaar ka mid ah shirkadaha waa weyn iyo sidoo kale bilaw yar oo mana hubo in aragtida ay aad ugu kala duwan yihiin iyaga. Ka baxsan miisaaniyadda iyo ilaha, ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxay wali raadinayaan warbixin ka sii wanaagsan, otomatiga si loo kordhiyo ilaha, iyo barnaamijyada lagu kordhinayo khibrada macaamiisha. Uguyaraan kuligeen intaas ayaan wada leenahay!
Ku saabsan Madowga Madoow ROI
Black Ink ROI waa SaaS-ku-saleysan, madal-macaamil-falanqeyn heer sare ah oo loogu talagalay iibka, suuq-geynta iyo hoggaamiyeyaasha P&L si loo hagaajiyo helitaanka macaamiisha, haynta iyo kor u qaadista fursadaha koritaanka.
Tags: adobeAnalyticsmadow roihabboonaanta brandsirdoonka ganacsigamacaamilka macaamiishamacaamiishasuuq-geynta suuqatikniyoolajiyadda suuqgeyntaMicrosoftomni-kanaalOracleiibin